Umsebenzi woMculo weYouTube kwaye uyintoni? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Usebenza njani u-Youtube Music kwaye uyenzela ntoni?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 273
Kutshanje, iqonga elithandwayo lokusasaza i-YouTube lisungule uhlaziyo olutsha oluvumela usetyenziso ukuba lusetyenziswe njengomnye umdlali womculo. Namhlanje sifuna ukukuxelela kancinci malunga noMculo we-Youtube, isebenza njani kwaye ingasinceda njani xa simamele iingoma esizithandayo.
I-YouTube Music lukhetho olutsha olubandakanya iqonga kwaye ivumela abasebenzisi bayo ukuba bamamele inani elikhulu leemixholo zomculo ngokuthe ngqo kwisicelo. Ukuba ungathanda ukufunda okungakumbi malunga neempawu zayo kunye nokusebenza kwayo, siyakumema ukuba uhlale nathi.
Umculo wakho wengingqi kuMculo weYouTube
Ukhetho kwiMusic Music kulula ukuyisebenzisaNangona kunjalo, sifuna ukukubonisa amaqhinga athile ahambelana nesi sixhobo sitsha sibandakanyiwe kwisicelo esiselfowuni senkonzo yokuhambisa kaGoogle.
Ngale ndlela intsha abasebenzisi beliqonga Abayi kuba nesidingo sokukhuphela umculo kwiividiyo zeYouTube. Ngoku banokuyimamela ngaphandle kokubhenela kwezinye iinkqubo okanye usetyenziso. Unenketho yokumamela iingoma zakho ozithandayo ngokuthe ngqo kwi-app.
Amanyathelo okusebenzisa i-Youtube Music
Inyani yile ukufunda ukusebenzisa i-Youtube Music kwizixhobo zethu eziphathwayo akunzima njengoko abaninzi bekholelwa. Apha siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ngendlela yokusebenzisa esi sixhobo singakholelekiyo kwaye umamele iingoma zakho ozithandayo ngaphandle kokushiya usetyenziso.
Inyathelo lokuqala omele ukulithatha liya kuba vula i-Youtube Music. Emva kokuba ungaphakathi kwesicelo kuya kufuneka ucofe ukhetho ku "Ithala leencwadi".
Ukusuka kwicandelo "Biblioteca”Uya kuba nakho ukufikelela kwii-albhamu, amagcisa kunye neengoma ezigciniweyo, kunye noluhlu lwakho lokudlalwayo kunye nokukhuphela.
Umyalezo uza kuvela kwiscreen ukubuza ukuba uyafuna na ukudlala iifayile zomsindo kwifowuni yakho. Kufuneka ucofe nje ku "Vumela" ukuqhubeka.
Ngoku uya kuba nokufikelela kwiinketho ezininzi, phakathi kwazo "iialbham, iingoma kunye nabazobi”. Ngazo uya kuba nakho ukuhamba kungekuphela kumxholo onikwa yi-YouTube kodwa nakwiselfowuni yakho.
Ukucofa "Iifayile zesixhobo”Uya kukwazi ukuvelisa yonke imixholo oyigcinileyo kwiselfowuni.
Guqula i-YouTube ibe sisidlali-mculo
Iqonga leYouTube liyaziwa ngokubanzi ngokuba lililo omnye wabadlali bomculo ababalaseleyo namhlanje. Kule sicelo unokufumana phantse yonke into ngokweengoma kunye nemixholo yomculo, hayi iingoma ezintsha kuphela kodwa nezona zidala.
Ilayibrari yomculo ebonelelwa yiYouTube ibanzi kakhulu kwaye yiyo loo nto iye yaba sisidlali somculo esihle. Ukuba ufuna ukusebenzisa iYouTube njengesidlali-mculo, ungasebenzisa ezinye izandiso ezifumanekayo kuGoogle Chrome.
Enye yezona zicetyiswayo kwaye zisetyenziswe ngabasebenzisi Umculo kuphela kwiYouTube. Ngolu lwandiso uya kuba nethuba lokwenza uluhlu lwakho lokudlala, ukhuphele iingoma zakho ozithandayo kwaye umamele unomathotholo ukuba uyafuna.
1 Umculo wakho wengingqi kuMculo weYouTube
2 Amanyathelo okusebenzisa i-Youtube Music
3 Guqula i-YouTube ibe sisidlali-mculo
Uyibhala njani imiyalezo ngqo kwi-Twitter?
Ungalutshintsha njani ulwimi lweakhawunti yakho ye-Twitter?